လူစီယာ - မာရျနတျသတို့သမီး | Apg29
လူစီယာ - မာရျနတျသတို့သမီး
လူစီယာ ပတ်သက်. အမှန်တရား။
အဆိုပါကြောင်နာမကိုအမှီရွှေဝါရောင် "Solbröd" ဖြစ်ခဲ့သည်။ "ရွှေဝါရောင်ပေါင်မုန်" "လူစီယာ" နှင့်နည်းလမ်းများမှလာ "လူစီဖာရဲ့သတို့သမီး။ " လူစီဖာမာရ်နတ်များအတွက်နာမည်တစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ တနည်းအားဖြင့်ဒါဟာ "မာရျနတျရဲ့သတို့သမီး" ကိုဆိုလိုသည်။
မိန်းကလေးများနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတွေသူမ၏ဆံပင်ထဲမှာဖယောင်းတိုင်နှင့်အတူလူစီယာအဖြစ်ဖွင့်ဝတ်စားဆင်ယင်တဲ့အခါမှာသူကစဉ်းစားပါ။ ဒါကြောင့်သူတို့ကအမှန်တကယ်အဖြစ်ဖွင့်ဝတ်စားဆင်ယင်ကြောင်းကားအဘယ်သူနည်း ထိုသို့သူတို့ထောက်ခံအားပေးတာဘယျသူနညျး
လူတွေမနာသီချင်းဆိုကြောင့်သူတို့ယေရှုနှင့်အတူသူမ၏အစားထိုးကြပါပြီဒါကြောင့်အလင်းစေသောလူစီယာကြောင်းကြွေးကြော်အခါ။ သူမသည်အစားယေရှု၏, ကြောင်းကိုတစ်ဦးသည်အန္တိခရစ်ဖြစ်လာသည်။
တကယ့်စစ်မှန်တဲ့အလင်းစေသောယရှေုသညျသည်! ဒါဟာကျနော်တို့ကိုခြီးမှမျးနှင့်ကိုးကှယျပါလိမ့်မယ်သူ့ကိုပါပဲ။ နှစ်ပေါင်းများစွာအသေကောင်ဖြစ်ရပြီတဲ့သူမသေလွန်သောသူတို့သည် "သန့်ရှင်းသူတို့" ။
ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်း "ခရစ်ယာန်" စိန့်လူစီယာဆင်နွှဲဖို့စတင်နှင့်အတူအယူမှားလူစီယာအခမ်းအနား။ ဒါပေမယ့်သူတော်စင်ဆင်နွှဲဖို့သင်တန်း၏ညီတူညီမျှမှားယွင်းနေပါ!
ဆိုလိုတာက "လူစီယာ" သို့မဟုတ် "ရွှေဝါရောင်", "အလင်း" ရှည်လျားများအတွက်ဆွီဒင်ဒါမှမဟုတ်နော်ဒစ်နိုင်ငံများအတွက်ကျင်းပနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
သူမလုံးဝနီးပါးမသိခဲ့မတိုင်မီ - ဒါဟာသူတို့စိန့်လူစီယာဆင်နွှဲဖို့စတင်ကြောင်း 1700 ခုနှစ်တွင်ဖြစ်ခဲ့သည်။
သို့သော် midwinter ရှည်လျားများအတွက်ဂုဏ်ပြုခဲ့ပြီး, နှင့် dises သို့မဟုတ်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းကိုအကာအကွယ်နတ်ဘုရားများ၏ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်, ဂုဏ်ပြု "လူစီယာ" ကိန်းဂဏန်းဖြစ်လာခဲ့သည်နှင့်ဂုဏ်တော်ကိုချီးမွမ်းကြ၏။
ဤသည်ဒီဇင်ဘာ 13 ရက်နေ့တွင် Midwinter နေ့တွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
"လူစီယာအခမ်းအနား" ၏ Prokopios
ဂရိနိုင်ငံအတွက် 500 ရဲ့ချ "Ultima သူးလီ" အကြောင်းကိုရေးသားခဲ့သည်အဖြစ် "လူစီယာအခမ်းအနား" ၏အသက်အကြီးဆုံးပုံပြင်, Prokopios ကနေလာပါတယ်။
ဆယ်ရက်ထာဝရညဉ့်ကျန်ရစ်သည့်အခါ "ဒါပေမယ့်အဲဒီအစိတ်အပိုင်း၌ရှိကြ၏သောမြင့်မားသောတောင်တို့, တအဘယ်မှာသူကိုအောက်တွင် Dalarna တှငျနထေိုငျသူလူမျိုး, နောက်ဆုံးတော့တစ်ဦးမီးပုံမီးပေါ်မှာ messenger ကိုတက်ကျော်ဝင်သောသူသည် , နေဝေးမြင့်တက်မြင်ခြင်းနှင့် 40-နေ့ကရှည်လျားသောညဥ့်မကြာမီထိုအခါမိမိတို့ကိုယ်ကိုဆင်ယင်ခြယ်သရန်, မီးနှင့်ဖယောင်းတိုင်တက်မြောက်ပိုင်းတိုင်းပြည်အတွင်းအမျိုးသမီးတွေယူပါ။ ကျော်ဖြစ်မည်, အဖြူရောင်အဝတ်ကိုဝတ်ကြသဖြင့်, ခါးလျှင်, သူတို့သည်နီတစ်ခုခုရှိ သို့မဟုတ်ကောက်ရိုးတစ်ခါးပတ်။ "
အဆိုပါအမျိုးသမီးသရုပ်ပြမှုစနစ် Lussi လူစီယာ၏အခြေခံသည်။
အဆိုပါဆောင်းယဉ်စွန်းချိန်အလယ်ခေတ်အတွင်းဒီဇင်ဘာလ 13 န်းကျင်ရာအရပ်ကိုယူခဲ့ပါတယ်။ ထိုအခါအမျိုးသမီးသရုပ်ပြမှုစနစ် Lussi ဖျက်ဆီး။
နတ်ဆိုး Lussi အရှင်လူစီယာများအတွက်ကျိုးကြောင်းဆင်ခြင်သည်။ ပိုပြီးကက်သလစ်သူတော်စင်နှင့်အတူထက်မာရ်နတ်ရဲ့နာမညျကိုလူစီဖာနှင့်ဆက်စပ်တစ်ကြိမ်ဒီဇင်ဘာလတွင်၏ဆယ်သုံးရက်နေ့တွင်ကျရောက်သောလူစီယာဖြစ်ခဲ့သည်။
ဒီဇင်ဘာလ 13 ရက်နေ့ကအဆိုပါအခမ်းအနားသည်အိုပေမယ့်နာမကိုအမှီနှင့်သူတော်စင်လူစီယာနှင့်အတူအသင်းအဖွဲ့မျှမျှတတအသစ်ဖြစ်၏။
ခြောကျလှနျ့ဖို့ဝေးက "ရွှေဝါရောင်" (လူစီဖာ - မာရျနတျ), ရောင်စုံလူကိုရွှေဝါရောင်နှင့်အတူအဝါရောင် buns ။
သူတို့သန့်ရှင်းသူတို့ဖန်တီးခဲ့ကြသည့်အခါပုံမှန်အတိုင်းသကဲ့သို့, ကက်သလစ်ဘုရားကျောင်းအယူသီးမှု, ခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်း, မာရ်နတ်, နတ်ဆိုးအတူတက်ရောနှော။
ကျနော်တို့သန့်ရှင်းသူတို့ကိုသို့မဟုတ်နတ်ဆိုးများမလိုပေ။ ယရှေုခရစျသလိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာအလင်းသည်နှင့်ငါတို့သည်သူ့ကိုအယုံကြည်ရသောအခါသူကိုအလငျးကိုပေးသောသူသာသညျယရှေု၏!
ကက်သလစ်သူတော်စင် - ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်း
သူတို့ကသေလွန်သောသူတို့သည် "သန့်ရှင်းသူတို့" ကိုကိုးကှယျပေမယ့်သူတို့ကပြပ်ဝပ်ကိုးကွယ်နှင့်ရုပ်တုကိုးကွယ်ခြင်း၏အပြစ်ရှိကြောင်းဖြစ်ကြောင်းနားလည်ပါသည်။
"ဒါပေမယ့်ငါလူစီယာမကိုးကွယ်ကြဘူး!" သငျသညျအံ့သြစေခြင်းငှါဟောပြော၏။ သငျသညျတစ်ချိန်ချိန် "စန်တာလူစီယာ" သီဆိုခဲ့ဖူးပါသလော
မာရ်နတ် - နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. လူစီယာလူစီဖာကဲ့သို့တူညီသောစကားလုံးကနေလာပါတယ်။ အကြှနျုပျကိုမယုံ, မာရ်နတ်သည်ဆက်ဆက်အလင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ဒါပေမယ့်လာသောအခါလူများကသူတို့ယေရှုနှင့်အတူသူမ၏အစားထိုးကြပါပြီဒါကြောင့်အလင်းစေသောလူစီယာကြောင်းဟောပြော၏။ သူမသည်အစားယေရှု၏သော antikristlig သင်္ကေတဖြစ်လာပါတယ်။
ဟေရှာယ 9: မှောင်မိုက်၌သွားလာသော 2.The လူများတို့သည်ကြီးစွာသောအလင်းမြင်ပြီသူတို့အားလူနေမှုအပေါ်မှာသေခြင်းနိုင်ငံအရိပ်ရကြမည်အလင်းထွန်းလင်းထွက်တွင်။
ယောဟန် 1:9။ အသီးအသီးမှအလင်းပေးမှန်သောအလင်းဤလောကသို့ကြွလာတော်ခံခဲ့ရသည်။
လူစီယာဆွီဒင်နဲ့တခြားနိုင်ငံများရှိဒီဇင်ဘာလ 13 ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ လူစီယာကွဲပြားခြားနားသောအသင်းတော်များ, လောကနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအခင်းအကျင်းအတွက်နှစ်ဦးစလုံးကျင်းပခြင်းဖြစ်သည်။ သူမ၏လောကနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးအခင်းအကျင်းဆင်နွှဲဖို့ကယ့်ချောသောကြောင့်, ကျနော်တို့ကခရစ်ယာန်မဟုတ်ကြောင်းနားလည်ပါသည်။ ယရှေုသညျခရစျတျောနှငျ့ပတျသကျခဲ့ထိုကဲ့သို့သောအခင်းအကျင်းအတွက်မီးမောင်းထိုးပြမခံခဲ့ရလေသည်။ လူစီယာလုပ်ဖို့ကမျြးစာကိုနဲ့ဘာမှမဟုတ်ရှိပါတယ်။ သူမသည်လတ်တလောတီထွင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ လူစီယာ ပတ်သက်. ဒဏ္ဍာရီလည်းသမ္မာကျမ်းစာသည်မဟုတ်, တကယ်အယူမှားနှင့်အရိပ်ရတဲ့။
လူစီယာသည်သူ၏အသေခံပြီးနောက်နှစ်ပေါင်း 100 canonized ခံခဲ့ရသူတစ်ဦးကက်သလစ်သူတော်စင်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည် 304. အတွက်စစ္စလီကျွန်းအတွက်ဆိုင်းရာကူစ်းအတွက်ကွပ်မျက်ခံရခဲ့သည်သူမသည်ခရစ်ယာန်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်း၏စွပ်စွဲခဲ့ပါတယ်, ဤရောမဧကရာဇ်ဆန့်ကျင်တဲ့ပုန်ကန်မှုဖြစ်စဉ်းစားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီမှာလူစီယာအကြောင်းကိုတော်တော်များများဒဏ္ဍာရီဖြစ်ကြပြီးသူတို့မပါဘဲစောင့်ရှောက်ဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်။ တစ်ခုမှာသူမခရစ်ယာန်တွေဟာပုန်းအောင်းရာရောမမြို့ရဲ့မြေအောက် catacombs စားနပ်ရိက္ခာနှင့်အတူသှားသောဖြစ်ပါတယ်။ သူမကအမှောင်ထဲမှာဥမင်လိုဏ်ခေါင်းသို့ ဝင်. ဘယ်မှာကြည့်ဖို့သူမကသူမ၏ခေါင်းပေါ်မှာဖယောင်းတိုင်ထားတော်မူ၏။ သငျသညျကိုသူတို့လူစီယာစိတ်ကူးရသောအခါငယ်ရွယ်မိန်းကလေးငယ်များတစ် chandelier ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ထုံးစံရှိတယ်ရှိသည်။
သူမသည်မကြာခဏသူ့မျက်စိတစ်စည်ဝတ်ထားနှင့်အတူပုံဖော်နေပါတယ်။ သူမကသူမ၏လက်ထပ်မပေးနိုင်သူတစ်ဦးအယူမှားမင်းသားဟာသူ့မျက်စိကိုထုတ်ဆုတ်တဲ့ဒဏ္ဍာရီရှိပါသည်။ ထိုအခါကသူမ၏အပေါ်အသစ်နှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်မျက်စိထုတ်ကြီးပွားသတည်း။
ကက်သလစ်ကမ်ဘာပျေါတှငျ, သူမမျက်စိ patroness နှင့် Ophthalmologicals သူမ၏အမည်အားမဖြစ်၏။ လူစီယာလည်းဆိုင်းရာကူစ်း၏နာယကသူတော်စင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီဇင်ဘာလ 13 ရက်နေ့တွင်ပြီးတော့များသောအားဖြင့်လူစီယာဆံပင်သို့အလင်းဆောင်ခဲ့ပေမယ့်အလင်းကိုဆောင်တတ်၏ခံရသောမိန်းမသည်မဟုတ်, ယရှေုသညျဖြစ်ပါတယ်။ သူသည်ထိုအလငျးကိုနှင့်တကွကြွလာသာ - သူသည်အလင်းဖြစ်၏။ ဒါဟာကျနော်တို့ယရှေုထံမှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြည့်ပယ်ရှားတော်မူသောအရာတို့ကိုမလုပ်ကြပါဘူးအရေးကြီးပါသည်။
နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. လူစီယာအလင်း, ဆိုလိုတာက lux ကနေလာပါတယ်။ မာရ်နတ်၏နာမည်တစ်ခုသူသည်လူစီဖာ, အတူတြူသတိထားမိ!
သူမသည်တစ်ဦးတန်ဆာများတွင်အလုပ်ခိုင်းထောင်ဒဏ်ခဲ့သည်။ သူတို့သူမ၏ဆွဲယူရောက်လာသောအခါ, သူတို့ကသူမ၏ကမောက်ကမနိုင်ဘူး။ သူတို့သူမ၏ခေါင်းဖြတ်သတ်ထိုအခါသူတို့ကအစုရှယ်ယာမှာသူမ၏ရှို့ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လည်းမအောင်မြင်ခဲ့သည့်အခါ။ လူစီယာရဲ့ခါးအနီရောင်တီးဝိုင်းစီးကြောင်းသူ၏အသွေးသည်သင်္ကေတဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါနော်ဒစ်ဒေသမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အထူးကြပ်မတ်လမ်းမှာလူစီယာဆင်နွှဲဖို့အတော်လေးတစ်ဦးတည်းဖြစ်ကြ၏။ သို့သော်အီတလီအချို့အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အစဉ်အလာရှိပါတယ်။ လက်ဆောင်များဟာ 1300 ကာလနာဘေးကိုမှသူတို့ကိုကာကွယ်ပေးလူစီယာ၏မှတ်ဉာဏ်ထဲမှာလူစီယာနေ့တွင် Verona ရဲ့ကလေးများဖြန့်ဝေကြသည်!
စီတန်းအတွက်တစ်ပါတ်မှုအတွက်လူစီယာတရာအနည်းငယ်ကီလိုကိုယ်စားပြုနေတဲ့ရုပ်တုတစ်ခုကိုဝတ်ဆင်ဆိုင်းရာကူစ်း၏မြို့၌တည်၏။ ဒါ့အပြင် Calabria အတွက်မြို့ Amaroni အတွက်သူတို့တစ်တွေစီတန်းအတွက်ပေမယ့်မြို့ရဲ့နာယကသူတော်စင်, စန်တာဘာဘရာ၏အခြားများ၏ကုမ္ပဏီအတွက်လူစီယာဆင်နွှဲ။
ဒါဟာပျေါလှငျဒါခရစ်ယာန်ယုံကြည်ခြင်းလူစီယာဆင်နွှဲရန်ပုံပေါ်စေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်တကယ့်ကိစ္စမဟုတ်ပါ။ ဒါဟာစစ်မှန်တဲ့အလင်းဤလောကသို့ကြွလာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်သူလူအားလုံးမှအလင်းကိုပေးတော်မူ၏သူသညျယရှေုကိုမီးမောင်းထိုးပြမှပိုကောင်းပါ! (ယောဟန် 1း9)